दुई तिहाई सरकारलाई काम गर्न कसले रोक्यो ? - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीप्रति आफ्नै पार्टीभित्रबाटै आलोचना सुरु भएको छ । दुई तिहाई बहुमतसहितको सरकार गठन भएको चार महिना बितिसक्दा समेत जनताले महसुस गर्ने गरी काम नभएको भन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रैबाट प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना सुरु भएको छ । नेपाल समाचार पत्र दैनिकले खबर छापेकाे छ ।
सरकारको आलोचना सुरु भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आलोचनाको प्रतिवादन गर्न नेताहरुलाई निर्देशन नै दिनुभएको छ । पार्टीका नेताहरुले दुई तिहाई बहुमत भएर पनि के कारणले सरकारले काम गर्न सकिरहेको छैन भन्ने प्रश्न अगाडि सारेको बताउँदै नेकपाका एक स्थायी समितिका सदस्यले नेपाल समाचारपत्रसँग भने– ‘कसैलाई दोष दिएर पन्छिने ठाउँ पनि अब सरकारसँग छैन, दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकारले पनि भनेजस्तो काम गर्न नसकेपछि सरकारको आलोचना सुरु भएको छ ।’
समयभित्र नै काम नगर्ने ठेकेदारलाई पक्राउ गर्न गृह मन्त्रालयले पत्राचार गरे पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले आपत्ति जनाउनुभएको छ । काम नगर्ने ठेकेदारलाई पक्राउ गर्ने गृहमन्त्री थापाको योजनाले सार्थकता पाउन सकेको छैन ।
गृहमन्त्रीको योजनालाई यातायात मन्त्री महासेठले नै चुनौती दिइरहेका छन्् । मन्त्रीहरुबीच नै समन्वयको अभाव देखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरुको कामको पनि अनुगमन हुने बताए पनि मन्त्रीहरुबीच देखिएको असमझदारीलाई समन्वय गराउने कार्यमा समेत दिन सक्नुभएको छैन् ।
नयाँ सरकार गठनसँगै वर्षौंदेखि अलपत्र परेका विकास निर्माणका काम अगाडि बढ्ने अपेक्षा नागरिकले राखेका थिए । सरकारले रेलको सपना बाँडे पनि राजधानी उपत्यकासँगै देशकाभर वर्षौंदेखि निर्माण हुन नसकेर सडकको अवस्था अस्तव्यस्त बनेको छ । सरकारले राजधानी काठमाडौंको कंलकी–नागढुंगा, बौद्ध–जोरपाटी–साँखु सडक मात्र हेर्ने हो भने पनि निकै कष्टकर देखिएको छ ।
नेकपा एकता प्रकृया लम्बियो, केन्द्रीय नेता बने भूमिकाविहीन
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरु ९ महिनादेखि भूमिका विहीन भएका छन् । पार्टी एकता […]
मन्त्रीलाई रोष्ट्रममा जान नदिए बसेकै ठाउँबाट विधेयक प्रस्तुत हुन्छ- योगेश भट्टराई
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का युवा नेता एवम् सांसद योगेश भट्टराईले ११ गतेको संसद […]
अब मेलम्चीको बाँकी काम सेनालाई ?
काठमाडौं । सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी कामको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिने तयारी गरेको छ । […]
काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सदन अवरुद्ध जारी राखेपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित भएको छ । […]
काठमाडौं । विश्व आर्थिक मञ्च अर्थात् डाभोस फोरमको वार्षिक बैठक विश्वका राजनीतिक नेता, अर्थविद्, प्राविधिक, […]